Ọkachamara iggba Overgwọ Maka Taxkwụ ingwọ na Peoria, Illinois | Thomas Howard
Ọkachamara iggba Overgwọ Maka Taxtụ Isi na Peoria, Illinois
Ọtụtụ ndị ọrụ na ndị na-azụ ahịa na-ahụkarị onwe ha n'ọnọdụ ụtụ ụtụ. Agbanyeghị na gọọmentị kwere nkwa ịkwụghachi ụtụ ụtụ ọzọ a kwụrụ, usoro ị ga-esi nkwụghachi adịghị nfe dịka ị chere.
N'ikwu eziokwu, enwere ike ịchọ ka ị gosipụta ihe doro anya na azụmaahịa gị mere obere ego n'oge enyere. N'ọnọdụ dị otú a, ọ bụ naanị ihe amamihe dị na ya inwe onye ọka iwu ọkachamara n'akụkụ gị.
You nwere ajụjụ ọ bụla?
Ihe kpatara o ji dị gị mkpa ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ na ụtụ isi na Illinois
Ọ bụrụ n’ị bi na Peoria, Illinois, ị nwere ike ịtụkwasị obi na aka anyị ma a bịa n’ihu ịgba akwụkwọ cannabis omempụ. Anyị enyerela ndị ahịa dị iche iche aka idozi okwu metụtara ojiji na ire nke mkpụrụ osisi cannabis.
1. Iji Nyere Aka Nchịkọta Eziokwu Banyere Taxtụ Isi Gị
Chọrọ onye ghọtara akwụkwọ ndekọ ego, iwu ụtụ gọọmentị, ma nwee ahụmịhe iji rụọ ụka iwu ụtụ isi. Enweghị onye ọka iwu nwere ahụmahụ, ịnwere ike ị nweta nkwụghachi ahụ kwesịrị gị. Okwu ahụ ga-agbakwu agbagha ma ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu ego, ebe enwere ike ịchọrọ ka ị nye ihe akaebe doro anya iji kwado ihe ị na-ekwu.
3. Nyere Gị Aka Inwetara Banyere estụ Isi Ọdịnihu
Otu n’ime ụzọ isi dozie nsogbu ụtụ ụtụ ụtụ bụ ịkwụ ụgwọ ego na oge ụtụ isi na-abịanụ. N’ọ bụrụ ezigbo onye ọka iwu, ị ga-enwe mkparịta ụka ma nweta ego n ’ụtụ isi gị maka afọ na-abịanụ. Nwekwara ike igosipụta na ikwesiri ka nkwụghachi gị wee nweta ego nlele maka ụtụ isi niile enyere gị aka. Agbanyeghị, ị ga-enwerịrị ọkachamara na ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ ga - anọnyere gị.
2. Nyere Ghota Onwe Gị N’iru ikpe
Adịla ngwa ngwa n'ụlọ ikpe na-atụleghị eziokwu niile. Ga-achọ onye ọka iwu na-ahụ maka ụtụ isi ga-enyere gị aka ịghọta ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ụtụ isi gị yana ma ịkwụrụ na ohere iji nkwụghachi. Enweghị ezigbo iwu gbasara iwu, ịnwere ike itinye oke ego na ịgba akwụkwọ ụtụ ụgwọ ị na-akwụghị n’enwetaghị uru ọ bụla.
4. Nyere rtzọ Taxkwụ Taxgwọ Maka Taxtụ Ego Maka Maka Ọdịnihu
Ọ bụrụ n ’ịhọrọ onye ọka iwu nwere nsogbu ga - eleba anya n’okwu ikpe ịkwụ ụgwọ ụtụ isi gị, enwetara n’aka na ị ga - enweta ya
nkwụghachi Na isi nke ahụ, a ga-edozi okwu niile gbasara ụtụ isi gị otu oge. Will gaghị eme ya
ị ga-echegbu onwe gị banyere ụgwọ ịkwụfe ma ọ bụ mkpa ịchọrọ nkwụghachi n'ọdịnihu
Họrọ Kachasị Taxkwụ Taxgwọ Maka Taxkwụ Taxgwọ Maka Ekpe na Peoria Illinois
Ijikwa ịgba akwụkwọ n'ihi nkwụghachi ụtụ adịghị mfe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ efunahụla nde kwuru nde na ụtụ ego n'ihi njikwa na-ezighi ezi banyere ya.
Mgbe ịhọrọ ọrụ anyị, ịkwesighi ịpụta n'ụlọ ikpe ma ọ bụ soro ndị ọrụ IRS soro gị. Ọkachamara nke ụtụ isi anyị, Dr. Thomas Howard, ga-elekọta ihe niile. Ọzọkwa, ọ ga - enyere gị aka ịghọta okwu gị, wee hụ na ị ga - enweta penny niile.
by Lauryn | Jan 24, 2020 | Azụmaahịa Ancillary Cannabis, ụlọ akụ cannabis, Cannabis HR Software Wurk, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Naanị ego nkịtị, Hemp CBD, ụlọ ọrụ hemp
Ọrụ na akụrụngwa mmadụ na ngwanrọ Cannabis Mmemme Cannabis HR dị oke mkpa mgbe ị na-eguzobe azụmahịa cannabis gị. Mgbe ị na-ewu afọ gị, ọ dị mfe nwude ngwaahịa gị, itinye ego na ikikere gị mana ekwekwala ka ndị ọrụ weghachite azụ ...